अझै पनि भारतीयलाई नागरिकता दिन सिफारिस गर्ने वडाध्यक्षलाई के भन्नुहुन्छ? – PathivaraOnline
Home > समाचार > अझै पनि भारतीयलाई नागरिकता दिन सिफारिस गर्ने वडाध्यक्षलाई के भन्नुहुन्छ?
admin October 30, 2020 October 30, 2020 समाचार	0
कैलाली, १४ कार्तिक । भारतीय नागरिकलाई बंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिलाउन प्रशासनलाई सिफारिस गर्ने धनगढीका एक जना वडाध्यक्षलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका नायव प्रहरी उपरीक्षक प्रतिक विष्टका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं १२ का वडाध्यक्ष गणेश प्रसाद जोशी पक्राउ परेका हुन् । साथै नागरिकता लिन खाेज्ने भारतीय नागरिक अलियास अन्सारी र सो कार्यमा सलग्न वडा नं १२ कै खुसीराम चौधरी र गीता चौधरीलाई पनि पक्राउ गरिएको छ ।
नायव प्रहरी उपरीक्षक विष्टले वडा नं १२ का पुनिराम चौधरीलाई नक्कली बुवा बनाएर नागरिकता लिन खोजेको कागजातका आधारमा वडाध्यक्ष र अन्यलाई पक्राउ गरिएको बताए ।
२०७५ साल फागुन महिनामा वडाध्यक्ष जोशीले वंशजको आधारमा भारतीय नागरिक अन्सारीलाई नागरिकता दिलाउन सिफारिस गरेको देखिएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार विदेशीले नेपाली नागरिक भएको झूटा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनमा विदेशीले नेपाली नागरिक भएको झुठो दावी गरि नागरिकता प्राप्त गरेमा एक बर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था रहेका छ ।
अछामबाट आएका कोरोना संक्रमित यी ब्यक्ति नै सिंहदरवार पसेपछि…